universal အီးမေးလ် App ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ » universal အီးမေးလ် App ကို
universal အီးမေးလ် App ကို APK ကို
လှပသောဒီဇိုင်း, အလိုလိုလုပ်ရပ်များ, Lightning အမြန်နှုန်း, အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေး -! အီးမေးလ်အသစ်တခုအစွမ်းထက်တစ်လောကလုံးကိုအီးမေးလ် app ကိုခုနှစ်တွင် go အပေါ်, Hotmail Gmail, Outlook, ချိန်းသို့မဟုတ် Yahoo ကအကောင့်မှလျင်မြန်စွာနှင့်လွယ်ကူစွာ! အီးမေးလ်က Check, ဖတ် reply, ဓါတ်ပုံများပေးပို့ add နှင့်အမြင် attachment များကို - သူငယ်ချင်းမိသားစုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူထိတွေ့နေဖို့။ အထိရောက်ဆုံးထုံးစံ၌အသစ်သောသင့်ဖုန်းတွင်သင့်အီးမေးလ်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ features တွေ, တက်ဘလက်, ဒါမှမဟုတ်စမတ်နာရီကိုခံစားပါ။
21 မှ 00:: -7ထံမှ mode ကို '' နှောင့်ယှက်မနေပါနဲ့ '' ဟုသတ်မှတ်တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီကအီးမေးလ်အကောင့်အတွက်အချိန်မီထုံးစံတွန်းအားပေးဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ, ဥပမာ '' သူ Work '' အီးမေးလ်လိပ်စာ 00
- အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေဒီဇိုင်း: သင်, သင် spam အဖြစ်အလံ, မာကုချင်ရှိမရှိ, နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားရန်ရှိသည်တခါမှာကိုယ့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်မျိုးစုံအီးမေးလ်များကိုဖျက်ပစ်ရန်မလို
- အဆက်အသွယ်ကိုယ်စားပြုပုံနဲ့အီးမေးလ်ချည် enable တစ်ခု option နဲ့အတူသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်သပ်ရပ်စာပုံး (စကားဝိုင်းများအားလုံးကိုအတူတူသေသပ်စွာဖော်ပြပေး)
- နေ့စွဲ, လက်ခံသူ, အကြောင်းအရာအားဖြင့်အဆင်ပြေရှာဖွေမှု, မဖတ်ရသေးသည့်အတွက်, သင်က flash ကိုအတွက်အီးမေးလ်များကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့မက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ပူးတွဲပါအလံပြထားသော
- အလိုအလျှောက်သီးခြားဖိုင်တွဲများသို့မဟုတ်ဖတ်ပြီးအဖြစ်မာ့ခ်သူတို့ကိုဝင်လာသောအီးမေးလ်များကိုရွှေ့ဖို့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက် filter များ
- PIN ကိုစကားဝှက်ကိုတက် setting အားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်ဆန့်ကျင်သင့်မိုဘိုင်း app ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ Enhanced လုံခြုံရေး
အဆိုပါ application ကိုလည်းသူကတစ်ဦးကို Yahoo, Hotmail, Outlook, MSN ကိုမေးလ်, Windows Live Mail, Gmail, AOL, GMX သို့မဟုတ်မည်သည့် POP / IMAP ကို ​​/ SMTP ရှိမရှိ, သင်တစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးသင်၏မေးလ်ရှိသည်ဖို့ထညျ့သှငျးနိုငျသောသူအပေါင်းတို့သည်အဓိကအီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုကိုထောက်ပံ့ စာတိုက်ပုံး -enabled ။
ဒီဗားရှင်းမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးအနည်းငယ် bug တွေနှင့်တိုးတက်လာသော app ကို performance ကို fixed ပါပြီ။
14.93 ကို MB